Home » Lahatsoratra ho an'ny vahiny » Soa azo avy amin'ny famokarana horonantsary orinasa amin'ny doka
Manomboka amin'ny sehatra media sosialy mihetsiketsika ka hatramin'ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra dia manjaka hatraiza hatraiza ny horonantsary. Io no fomba maharesy lahatra indrindra ny fifandraisana amin'ny olona marobe ary avelao ny orinasanao hahatratra azy ireo amin'ny fomba mandaitra. Tsy isalasalana fa ny horonan-tsary dia mahomby kokoa noho ny sary, ary na ho an'ny dokam-barotra amin'ny marika, fampiroboroboana, na fivarotana entam-barotra, ny tsirairay dia mampiasa ny dinamisme an'io fomba mahomby io! Saingy tsy ny fakana sary sy fanovana azy ireo an-tsokosoko. Raha tsy mahomby ianao amin'ny famoronana tifitra misy ny zava-misy sy maharesy lahatra, dia sary vitsivitsy fotsiny izy ireo izay voatahiry ao anaty kapila mangirana. Mba hahomby amin'ny fanaovana doka ny vokatrao na ny orinasanao dia mila fanampiana matihanina toa anao ianao viddedit mba hamokarana horonan-tsarimihetsika izay afaka mahasarika olona ary avelao ny marika hiresaka ho anao.
Tombony amin'ny horonan-tsarimihetsika orinasa amin'ny doka
Raha mbola tsy mitady fiaraha-miasa amin'ny famokarana horonantsary orinasa ianao hanampiana anao hanao dokambarotra momba ny orinasanao na amin'ny sahirana, na hampiasa ny iray na tsia, dia zahao ity manaraka ity, ary ho gaga ianao amin'ny majika azon'izy ireo atolotra!
Mampiroborobo ny varotra
Tsy isalasalana fa mahaliana sy mahafinaritra ny horonan-tsary, ary afaka mihatsara ianao fiovam-pony amin'ny alàlan'ny 80% mahery amin'ny alàlan'ny fampidirana horonan-tsary momba ny orinasanao tanterahinao ao amin'ny pejin'ny tranokalany. Lahatsary iray manazava ny serivisinao na ny vokatrao no mahomby kokoa amin'ny fampiakarana ny varotrao. Manolotra anao ny fahafaha-mamelona ny vokatrao na serivisinao izy ireo ary manao azy io ho mahasarika ny mason'ireo mpividy rehefa manolotra azy. Noho izany ny horonan-tsarimihetsika dia fomba mahomby kokoa amin'ny doka sy fampitomboana ny varotra noho ny taratasy taratasy na trakta.
Ny tena izy, miaraka amina orinasa matihanina noforonina, afaka mahasarika olona maro kokoa ianao amin'ny famaritanao ny tombotsoan'ny vokatrao na serivisinao, manao dokam-barotra amin'izy ireo ary mahazo fidiram-bola bebe kokoa mampisondrotra ny varotra.
Manampy amin'ny fampivoarana ny fifandraisana
Ny horonan-tsary dia fitaovana iray lehibe hanatonana ny olona, ​​hahazoana mpividy mety hivelatra, ary hanitatra ny orinasanao. Rehefa mampiasa azy amin'ny famaritana ny marikao ianao dia tsy vitan'ny hoe mampahafantatra ny olona momba ny orinasanao fa afaka manorina fifandraisana azo itokisana mampifandray azy ireo amin'ny marikao. Rehefa hitan'ny olona ny vokatra sy ny tarehy ao aoriany, dia mahatsapa ho mifandray amin'ny orinasanao izy ireo. Azonao atao ny manararaotra manao ny maha-olona ny marika malalanao. Rehefa afaka manangana fatorana miaraka amin'ireo mpitsidika ianao dia azonao atao ny mamadika ireo mpitarika ho mpanjifa mahazatra ny orinasanao!
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fampiasana ny horonan-tsarimihetsika ho an'ny dokam-barotra dia ny fahafahanao manolotra fahafinaretana ho an'ny mpanjifa mandritra ny fampisehoana sy fampiroboroboana ny orinasanao. Ankoatr'izay, ny horonantsary noforonina mifantoka amin'ny tombontsoa sy ny fampiasana ny serivisinao na ny entanao dia ahafahanao miavaka amin'ny fonosana, satria alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra mividy dia mitady vokatra na serivisy manokana an-tserasera ny olona.
Aza adino, ny entana na serivisy manaitra sy avo lenta fotsiny ihany no tsy ampy hamelana ny olona handray fanapahan-kevitra. Tsy maintsy mamolavola tantaram-pitiavana maharesy lahatra ny orinasa ianao rehefa manao dokambarotra azy io mba hampitomboana ny fahaizanao sy hanoloranao olona antony hifandraisany amin'izany. Ary inona no mety ho tsara kokoa noho ny famokarana horonantsary matihanina manao an'io asa io amin'ny fomba mandaitra?
Rehefa afaka mijery ny ezaka sy ny fanoloran-tenan'ny ekipanao ny olona hampiavaka ny marikao dia afaka mahatsapa ny fihetseham-po sy ny fientanam-po izy ireo. Arak'izany ny horonantsary orinasa natao ho an'ny doka dia manampy ny olona hahatakatra sy hatoky ny orinasa tantanan'ny olona manana eritreritra sy soatoavina mitovy amin'izany. Ny sehatra media sosialy dia fomba iray hafa tsara hizarana ny tantaranao amin'ny alàlan'ny sanganasa orinasa.
Ny singa orinasa dia tsy voafetra amin'ny fetra voafetra, fa tokony haharitra 5-minitra farafaharatsiny. Noho ny fampisehoana hatry ny ela fa tsy dokam-barotra amin'ny fahitalavitra na radio dia manana fahafaha-manao tsara kokoa hivoatra ny fahatokisan'ny mpitsidika azy.
Mampahafantatra ny toetranao amin'ny orinasanao
Eny, ny horonan-tsary dia fitambarana mozika, sary ary fitantarana izay miara-manorina tsipika maharesy lahatra ny orinasanao hisarika ny sain'ny mpijery. Azonao atao ny mamela ny olona hahafantatra ny tantara ao ambadiky ny orinasanao amin'ny fomba mahafinaritra mampifandray azy ireo aminy ara-pientanam-po.
Amin'ny sombin-javatra mahomby, azonao atao ny mampiseho ny fitiavanao rehefa manao dokambarotra momba ny orinasanao. Miaraka amin'ity tanjaky ny horonantsary faratampony ity, mahazo fotoana hahafantarana ny marika ny olona ary hahatsapa ny fihetseham-ponao ao ambadik'izany. Arakaraka ny hafanam-pon'ilay dokam-barotra no ampitaina, arakaraka ny hahabe ny fivoarana azonao antenaina. Ary tsy misy fomba tsara kokoa hametrahana fifangaroan'ny fampiasa sy ny toetra amam-panahy mandritra ny fanaovana dokambarotra ny marika fa tsy ny horonan-tsarimihetsika.
Search Engine Favorite Videos
Takiana aminao ny hampiakatra ny isan'ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Atsofohy ao anaty tranokala ny atiny hita maso ary azo antoka fa milahatra amin'ny motera fikarohana ianao. Ny fampiasana votoaty hita maso ao amin'ny tranonkalanao dia manampy anao hampiasa SEO mahomby kokoa.
Azonao atao ny manantena ny laharan'ny horonan-tsarimihetsika misy anao ao amin'ny motera fikarohana rehefa mampiasa fomba feno voarindra miaraka amin'ny tag sy ny fampahalalana mety ianao.
Rehefa manana hevitra marina momba ny hevitra ilainao hatao dokam-barotra ianao dia afaka mahazo ny famokarana horonantsary orinasa tsara indrindra amin'ny fitondrana ny marikao amin'ny faran'ny fanapahana. Ny sombin-javatra misy fiatraikany toy izany dia manintona, manampy anao hihazona sy hanitatra ny tratranao ary hanatsara ny varotrao.
Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fiainana amin'ny alina dia miady amin'ny hitazomana ny fiainana amin'ny alina any Barcelona Beachfront